China Taper ala agba (Inch) emepụta na suppliers | JITO Iburu
Tapered ala biarin ndị dị iche iche biarin, na n'ime na elu yiri mgbaaka nke amị nwere tapered raceways. Nke a na ụdị amị na-ekewa dị iche iche bughi ụdị dị ka otu ahiri, abụọ n'ahịrị na anọ n'ahịrị tapered ala biarin dị ka ọnụ ọgụgụ nke e nyere ahịrị nke rollers arụnyere.
Nkebi Nke 2780/2720
Iburu .dị Taper ala agba (Inch)
Ihe onwunwe Chrome ígwè GCr15
Nkenke P0, P2, P5, P6, P4
Nwechapụ MMA, C2, C3, C4, C5
Iburu nha dị n'ime ime 0-200mm, mpụta dayameta 0-400mm
Typedị onu Brass, ígwè, naịlọn, wdg.
Bọọl agba Njirimara Ogologo ndụ na ogo dị elu
Obere-mkpọtụ na-achịkwa njikwa mma JITO
Akwa-ibu site na elu elu-oru imewe
Ọnụ ego mpi, nke kachasị baa uru
Ọrụ OEM nyere, iji zute ndị ahịa
Ngwa Omogbọala, igwe na-akpụ akpụ, igwupụta ihe, igwe ọrụ, igwe plastik na ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Iburu ngwugwu Pallet, akpa osisi, nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa Standard exporting mbukota ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
Typedị ngwugwu: A. Plastic akpa Pack + Carton + Osisi pallet
B. Roll Pack + Carton + Pallet Osisi
C. Igbe nke Otu + Akpa rọba + Carton + Pallet Wooden
Ibu (iberibe) 1 - 100 100. 100
Est. Oge (ụbọchị) 2 Ndi kpakorita
Taper ala Iburu Okwu Mmalite:
Tapered ala biarin ndị dị iche iche biarin, na n'ime na elu yiri mgbaaka nke amị nwere tapered raceways. Nke a na ụdị amị na-ekewa dị iche iche bughi ụdị dị ka otu ahiri, abụọ n'ahịrị na anọ n'ahịrị tapered ala biarin dị ka ọnụ ọgụgụ nke e nyere ahịrị nke rollers arụnyere. Single n'ahịrị tapered ala biarin nwere ike idi radial ibu na axial ibu na a otu direction. Mgbe eburu ihe nkedo na radial ibu, a ga-emepụta akụrụngwa akụrụngwa, yabụ, eburu ihe ọzọ nwere ike iguzogide ike axial na ntụgharị ihu dị mkpa iji dozie.
Taper ala agba Ngwa
Tapered ala biarin ndị na-abụkarị nke a iche iche ụdị, ya bụ, a conical n'ime mgbanaka nzukọ esịnede nke dị n'ime mgbanaka na a ala na a onu nzukọ nwere ike ndokwasa iche iche si ná mpụga bevel (elu mgbanaka). A na-ejikarị agbatị na-agbagharị agbagharị na ụgbọ ala, igwe na-agba ọsọ, Ngwuputa, nkà mmụta banyere ígwè, ígwè ígwè na ọrụ ndị ọzọ.
Tapered ala Iburu Suffix nkọwa:
A: Esịtidem mgbanwe mgbanwe
B: ụba kọntaktị n'akuku
X: Akụkụ ndị dị na mpụga dị ka ụkpụrụ ụwa si dị.
CD: Mgbanaka elu nke abụọ na oghere mmanụ ma ọ bụ mmanụ mmanụ.
TD: Mgbanaka dị n'ime ya na boreered.
Njikọ 30300 Series Tapered biarin katalọgụ
Max aro Fillet Radii
Na mpụga Dia
Ọ bụrụ na karịa, biko pịa weebụsaịtị anyị www.jito.cc
- Na mbido, anyị ga-enwe nkwukọrịta n'etiti ndị ahịa anyị maka ihe ha chọrọ, mgbe ahụ ndị injinia anyị ga - arụ ọrụ kachasị mma dabere na mkpa ndị ahịa na ọnọdụ ha.
Akara Ogo (Q / C)
- N'ikwekọ n'ụkpụrụ ISO, anyị nwere ndị ọrụ Q / C ọkachamara, ngwá ọrụ nyocha ziri ezi na usoro nyocha nke ime, a na-emejuputa njikwa mma na usoro ọ bụla site na ịnweta ihe nnweta ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa iji hụ na ogo anyị bi.
- A na-eji ngwongwo mbupụ mbupụ na ihe eji echekwa gburugburu ebe obibi maka ebe anyị bi, igbe ndị a na-ahụkarị, akara ngosi, akara ngosi wdg.
- Dị ka ọ dị, a ga-ezigara anyị ndị ahịa site na njem ụgbọ mmiri n'ihi oke ibu ya, ikuku na-adịghị mma, na-egosipụta dị ma ọ bụrụ na ndị ahịa anyị chọrọ.
- Anyị na-enye ikike bebi anyị ka anyị nwee ntụpọ na ngwongwo na ọrụ maka ọnwa 12 site na ụbọchị mbupu, a na-ewepụ akwụkwọ ikike a site na ojiji na-akwadoghị, ntinye na-ezighi ezi ma ọ bụ mmebi anụ ahụ.
Q: Gịnị bụ gị mgbe-sales ọrụ na akwụkwọ ikike?
A: Anyị na-ekwe nkwa iburu ọrụ ndị a mgbe achọtara ngwaahịa nkwarụ:
1.12 ọnwa ikike site na ụbọchị mbụ ịnata ngwongwo;
A ga-eziga nnọchi na ngwongwo nke usoro gị ọzọ;
3.Refund maka ngwaahịa nkwarụ ma ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ.
Q: you na-anabata iwu ODM & OEM?
Azịza: Ee, anyị na-enye ndị ahịa zuru ụwa ọnụ ODM & OEM, anyị nwere ike ịhazi ụlọ n'ụdị dị iche iche, yana nha dị iche iche, anyị na-ahazi bọọdụ sekit na igbe nkwakọ ngwaahịa dịka ihe ị chọrọ.
Q: Gịnị bụ MOQ?
A: MOQ bụ 10pcs maka etozu ngwaahịa; maka ahaziri ngwaahịa, MOQ ga-kparịrị tupu. Enweghị MOQ maka iwu nlele.
Q: Ogologo oge ole ka oge ndu bụ?
A: Oge ndu maka iwu ntanye bụ ụbọchị 3-5, maka nnukwu iwu bụ ụbọchị 5-15.
Q: Etu esi etinye iwu?
A: 1. Email anyị ihe nlereanya, akara na oke, ozi kọntaktị, ụzọ mbupu na usoro ịkwụ ụgwọ;
2.Proforma Invoice mere ma zigara gị;
3.kwụ ụgwọ zuru ezu mgbe ị kwadoro PI;
4.Confirm ugwo ma hazie mmeputa.
Nke gara aga: Taper ala agba (Metric)
Inch Tapered ala Iburu
Nnukwu ihe eji agba agba
Metric Tapered ala biarin
Single Ahịrị taper ala agba
Taper ala agba
Taper ala agba 30306 Iburu
High nkenke wheel Hub Iburu Automotive Fr ...